Warysi: Cadde Gabow oo Saluugsan Dowladda Dhexe iyo Tan Gobolkaba | JAMHURIYADDA
Home Gudaha Warysi: Cadde Gabow oo Saluugsan Dowladda Dhexe iyo Tan Gobolkaba
Wargeyska Jamhuriyadda wuxuu fursad u helay inuu wareysi gaar ah la yeesho Muddane Cadde Gabow, oo intii u dhexeysay 2005 ilaa 2007 ahaa guddoomiyihii Gobolka Banaadir iyo Duqa magaaladda Muqdishu.
Muddane Cadde wuxuu ku soo dhaawacmay musiibadii qaraxa Hoteel Makka ee bilowgii 2019ka, wuxuuna haatan caafimaad u joogaa dalka Maraykanka.
Jamhuriyadda – Waxaanu maqalnay inaad joogtay Hotel Makka markii masiiba ku dhacday, bal war naga sii sidee xaaladaadu tahay guud ahaan?
Muddane Cadde – Qaraxu ma ahayn wax yar, Eebese waa iga badbaadiyay. Waxaan u soo baxay si aan kaga hortago saaxibkey oo isoo wacan. Intaan jidka ku jiray ayuu dhaca. Al-hamdulilaah, muruqa garabka midigta ayaa wax iga gaareen, waxaase helay gargaar wanaagsan iyo dhaqaatir aqoon leh.
Jamhuriyadda – Tan iyo ismaandhaafkii diblomaasiyadda Kenya (bartamihii February 2019), waxaa magaaladda lala beegsaday wax ka badan 100 qarax, miyaysan taas niyad jib ku rideen dadweynaha deggan caasimadda?
Muddane Cadde – Dadweynaha gobolka banaadir waa dad Eebe ku maneystay sabar iyo adkeysi. Intii dhimatay Allaha u naxariisto, intase nool waxay ku jiraan dadaal, ileen cidna reerkooda uma masruufeysee. Dadka waa ka gudbeen absiin.
Jamhuriyadda – Idaacadaha waxaa laga maqlaa in Guddiga Amniga Qaranka ay adkeynta sugidda amniga caasimadda u xilsaareen gobolka Banaadir iyo ciidanka Boliiska, miyaysan taas wax ka bedelin xaaladda?
Muddane Cadde – Sugidda amniga ma aha hawl yar, ciidan la kordhiyo keliyana waxba ka ma teri karo, meesha waxaa ka maqan doorkii dadweynaha. Ilaa cadaalad darro ay tirsanayaana nabad ma dhawa.
Jamhuriyadda – Bacdamaa aad hore gobolka u soo maamusha, maxaa ku tilmaami kartaa horumarka caasimadda ay sameeysay tan iyo markii dowladda la aqoonsaday?
Muddane Cadde – Magaaladda aad iyo aad ayay u dhisantay oo aad ayay u ballaaratay, dadkeeduna maanta waa ilaa 3 malyan. Hase yeeshee dadaalkaas, waa mid dadweynahu leeyahay, gaar ahaan hanti leeyda maalgashatay. Wax adeeg bulsha ah oo u dhigma canshuurta ay bixiyaan ka ma helaan dowladda dhexe iyo tan gobolkaba.
Jamhuriyadda – Sideebaad u arkeysaa xisbiyadda siyaasigga ah, miyeeysan keeni karaa isbedel wax ku ool ah, haddii tallada la wareegaan?
Muddane Cadde – Mucaaradku ma aha mid mabda’ siyaasadeed amase aragtii dheer leh ee waa magac u yaal, aan waxba ku mideysneen. Ma filayo inay isbedel dhalin karaan.
Jamhuriyadda – Tartanka Ciyaaraha Afrika ee Conferation of African Football – CAF, waxaa la sheegay in xulka kooxda Muqdisho City ay uga qayb geli doonto Soomaaliya. Maxaad ka fileysaa in kooxdaas ay soo hooyaan?
Muddane Cadde – Ciyaartoyda Soomaaliyeed waa dhallinyaro aad u firfircoon oo niyad haya, hase yeeshee u baahan khibrad iyo aqoon farsamo. Kooxda Muqdisho kuwaas ayay la mid tahay, taageerada Mustaf Dhuxulow oo keliya guul laguma soo hooyn karo. Iima muuqato cid u soo jeedo inay maalgeliso mustaqbalka dhow, waxayna u baahan yihiin garoomo casri ah iyo tababareyaal xirfad sare leh.
Previous articleXaliima Aaden: Quruxda Xijaabka
Next articleFaallo: Jawiga Siyaasadda Galmudug